Feno loko, tonga ao Polaroid ny rebrand miaraka amin'ny sary famantarana | Famoronana an-tserasera
Tonga ny "rebrand" Polaroid feno loko
El "Rebrand" marika toa an'i Polaroid Izy io dia azo raisina ho toy ny fiverenan'ny niandohany niaraka tamin'izay loko rehetra nanondro azy, farafaharatsiny momba ny marika sy ny loko efa nekena toy izany.
Marina fa ny fiverenana dia natao tamin'ny loko voalohany, na dia eo aza ny sasany amin'ireo tonon'ny loko volavola, dia tsy mamiratra izy ireo. Na izany aza, andao fantarina ny sasany amin'ireo mampiavaka an'ity «famerenanana» ity.
Tsy maintsy indrindra ny rebrand amin'ny fampiraisana orinasa vaovao hametraka izay efa Polaroid Originals. Ary raha ny marina hanomezana entity bebe kokoa amin'izao fotoana izao, nandefa fakantsary vaovao antsoina hoe Polaroid Now izy.
Polaroid Originals dia noforonina tamin'ny taona 2017 rehefa ny vondrona The Impossible Impiry natambatra tamin'i Polaroid. Ity sampan'ny orinasa ity dia nanohy nanamboatra fakantsary eo noho eo, raha i Polaroid kosa dia tompon'andraikitra tamin'ny fividianana vokatra tsy misy fakan-tsary.
Ny rebrand dia natao hanomezana mazava kokoa ny mpanjifa rehefa mampiray ny marika amin'ny mombamomba azy sy tsy manam-paharoa izay manana fakantsary analog amin'ny fanahiny manokana. Ary hanehoana azy inona no tsara kokoa noho izany avana sy fipoahana loko izany amin'ny sary famantarana vaovao.
Raha ny marina, ny loko tsirairay amin'ity fipoahana loko ity dia manome "loko" ny tsirairay amin'ireo variana amin'ilay fakantsary Polaroid vaovao. Raha ny marina dia izao avana miloko dia ampahany amin'ny sary fototra marika. Raha ny momba ny fakantsary vaovao dia fampitahana amin'ny rafitra autofocus, bateria lehibe kokoa ary tselatra manify ho an'ireo fotoana ilaina ireo; somary lavitra ny tamin'ny herintaona lasa izay.
Una miverina any amin'ny faka miaraka amin'ny loko rehetra izay efa akaiky hatrany Polaroid hatrizay. Ho hitantsika izao ny fandehan'ny varotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Tonga ny "rebrand" Polaroid feno loko
Fianarana an-tserasera maimaimpoana vaovao ao amin'ny Thyssen Museum: Edward Hopper, sinema ary fiainana moderina
Ireo vato kely ireo dia niova ho biby mahafatifaty rehefa nolokoina